'' Alifka Kaa Xumaadaa , Al Buqruu Ku Qabtaa '' . Ahmed Nour Guruje
Wednesday June 12, 2019 - 14:11:51 in Articles by Hadhwanaag News
Doorashadii dhacday 2017 waxay ku bilaabantay jawi qurux badan oo caafimaad qaba ,
Doorashadii dhacday 2017 waxay ku bilaabantay jawi qurux badan oo caafimaad qaba , taasoo si xiiso iyo xamaasadle u socotay ilaa heer danbe oo ay leexatay .
Hanaankii doorashadaasi u socotay hadii la barbar dhigo ciyaaraha ku bada cagtana waxaa la odhan karaa , ciyaartaasi waxay ahayd mid u socota habka loo xamaasadda badan ee loo yaqaano isu taabashadda ( one touch ) habkaas oo ah weerar iyo weerar celis aan nasasho lahayn .
Hadaba Xisbiga Kulmiye oo haystay fursado badan oo aanu haysanin Xisbigga Waddani oo mucaarid ahaa sidda taageeradda xukuumadda ayaa hadana ka shekiyey in uu ku guulaysan karo si xarago ah , waxaanu si kakan uga ololeeyay goboladda Bariga , halkaasoo la saaray sameecado aan heesaha ka baxayaa wanaagsanayn .
Ciyaar yahanadii ka faltamay Goboladda Barigana waxaa ka mid ahaa Boqor Buurmadow , kaasoo ereyadii afkiisa kasoo baxayay ee aan wanaagsanayn Xisbigga Kulmiye iyo taageerayaashiisu u buunbuuniyeen si wayn uguna beer raqeen .
Hadaba ninba geedka uu beertu ayuu midhihiisa goostaaye , kulmiye codkii uu ku heley habkaa kakan , waxaa uga danbeeyey midho kakan oo ka daba yimi , maxaa yeelay Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa alifkii kaa xumadaa albaqra ayuu ku qabtaa .